Yakha iphothifoliyo yakho yokutshalwa kwezimali ngokwemigomo obheka njengokubalulekile. Khetha iphothifoliyo yakho yokutshala izimali ngokuvumelana nemigomo yakho: ukukhula ngenani lamasheya, ukukhishwa kwemakethe yezinkampani, isivuno sonyaka sonyaka, imibiko yezimali ezinzuzo, njll.
Inani lentengo lenyuke:
Nciphisa ukukhethwa kwezinkampani ezinamasheya awo aphakama esikhathini esithile esikhethiwe.
Izigaba zikhokhwe: *
Imiklomelo - inkokhelo, ibalwa kusukela kwinzuzo yenkampani futhi ikhokhwe yisinqumo somhlangano wabanikazi bamasheya. Izigaba ngokuvamile zimelela izinkokhelo zezimali, kodwa zingakhishwa ngesimo samasheya noma enye impahla.
Izwe noma i-Stock Exchange:
Nciphisa isampula yezinkampani endaweni ethile noma ukushintshaniswa kwamasheya lapho amasheya enkampani athengiswa khona.
kusukela ngesonto eledlule
kusukela ngenyanga eyedlule
ezinyangeni ezintathu zokugcina
kusukela ngonyaka odlule
ngaphezu kweminyaka emithathu eyedlule
njalo emva kwezinyanga eziyisithupha
kaningi izikhathi ezine ngonyaka
Kusuka kuwo wonke umhlaba Belgium Bulgaria Canada Croatia Denmark E-Australia E-Austria E-New Zealand EFrance EJalimane ENorway EPakistan EPortugal ESingapore ESpain ESwitzerland Estonia Finland Greece Hungary I-Argentina I-Brazil I-Chile I-China I-Colombia I-Cyprus I-Czech Republic I-Hong Kong I-India I-Japan I-Latvia I-Lithuania I-Poland I-Russia I-Slovenia I-Sri Lanka I-Taiwan I-United Arab Emirates I-United Kingdom I-Venezuela I-Vietnam INingizimu Korea IYurophu Igalikuni Indonesia Iningizimu Afrika Ireland Israyeli Italy Iziwe Ezihlangene Luxembourg Macedonia Malaysia Mexico Morocco Netherlands Philippines Sweden Thailand AMS (I-Amsterdam Exchange) ASE (I-NYSE Market (Amex)) ASX (I-Australian Stock Exchange) ATH (I-Athens Stock Exchange) BCN (I-Barcelona Stock Exchange) BDP (I-Budapest Stock Exchange) BER (I-Berlin Stock Exchange) BKK (I-Thailand Stock Exchange) BMF (I-Brazil Mercantile & Futures Exchange) BRN (I-Berne eXchange) BRU (Euronext Brussels) BSE (I-Bombay Stock Exchange) BTS (BATS Izimakethe Zomhlaba Wonke) BUE (Buenos Aires Stock Exchange) BUL (IsiBulgaria Stock Exchange) BVC (I-Columbia Stock Exchange (i-Bolsa de Valores de Columbia)) CBT (I-Chicago Board of Trade) CCS (I-Caracas Stock Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CNQ (I-CNQ) COL (I-Colombo Stock Exchange) CPH (I-Copenhagen Stock Exchange) CSC (Ice Futures US) CSE (I-Canadian Stock Exchange) CYP (I-Cyprus Stock Exchange) DME (Dubai Mercantile Exchange) DUB (I-Irish Stock Exchange) DUS (Dusseldorf Stock Exchange) ENX (Ama-Euronext Derivatives) EUX (I-Eurex) FRA (I-Frankfurt Stock Exchange) FUK (I-Fukuoka Stock Exchange) GER (I-XETRA Stock Exchange) HAM (Hamburg) HAN (Hanover) HEL (I-Helsinki Stock Exchange) HKF (I-Hong Kong Futures Exchange) HKG (I-Hong Kong Stock Exchange) HSX (I-HoChiMinh Stock Exchange) ICE (Ice Futures Yurophu) IOB (Ibhuku Lama-International Order) ISE (Isi-Irish) IST (Istanbul Stock Exchange) JKT (I-Jakarta Stock Exchange) JSD (I-JASDAQ Securities Exchange) JSE (I-Johannesburg Stock Exchange) KDQ (KOSDAQ) KFE (I-Korean Futures Exchange (KOFEX)) KLS (I-Malaysia Exchange) KOE (KOSDAQ) KSA (I-Karachi) KSC (Korea Stock Exchange) LBC (I-Casablanca Stock Exchange (iBourse de Casablanca)) LIS (I-Euronext Lisbon) LJE (Ljubljana Stock Exchange) LSE (I-London Stock Exchange) LUX (I-Luxembourg Stock Exchange) MAC (I-Macedonian Stock Exchange) MCE (I-Madrid Stock Exchange (Amakati)) MCX (I-Moscow Exchange (MOEX)) MDE (Ama-Derivatives ase-Malaysia) MEX (I-Mexico Stock Exchange) MFM (I-Mercado Espanol de Futuros Financieros (i-MEFF)) MIL (I-Milan Stock Exchange / i-Borsa Italia) MSE (I-Montreal Stock Exchange (iBourse de Montreal)) MUN (EMunich) NAG (I-Nagoya Stock Exchange) NAS (NASDAQ) NCM (NASDAQ) NGM (NASDAQ) NJM (I-Hercules Stock Exchange) NMS (NASDAQ) NSE (I-National Stock Exchange yaseNdiya) NYM (I-New York Mercantile Exchange (NYMEX)) NYQ (I-NYSE) NYS (I-NYSE) NZE (I-New Zealand Stock Exchange) OBB (I-OTC Bulletin Board Market) OMX (Omunye waseChicago) OPR (I-OPRA) OSE (I-Osaka Securities Exchange) OSL (Oslo Bors) PAR (I-Euronext eParis) PCX (NYSE Arca) PHS (I-Philippine Stock Exchange) PNK (Ama-Pink Sheets) PRG (I-Prague Stock Exchange) RSE (OMX Baltic) SAF (I-South African Futures Exchange) SAO (BOVESPA - iSao Paolo Stock Exchange) SES (I-Singapore Exchange) SET (I-Stock Exchange yaseThailand) SFE (I-Australian Stock Exchange Futures) SGO (I-Santiago Stock Exchange) SGX (I-Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd.) SHA (Shanghai Stock Exchange) SHE (I-Shenzhen Stock Exchange) SHH (Shanghai Stock Exchange) SHZ (Shenzhen) STO (I-Stockholm Stock Exchange) STU (Stuttgart Stock Exchange) TAI (I-Taiwan Stock Exchange) TAL (OMX Exchange Baltic - Talinn) TLV (I-Tel Aviv Stock Exchange) TOR (I-Toronto Stock Exchange) TSE (I-Tokyo Stock Exchange) TWO (Taiwan OTC Exchange ) VAN (I-Toronto Venture Exchange) VIE (I-Vienna Stock Exchange) VSE (I-OMX Baltic Exchange - i-Vilnius) VTX (SIX Swiss Exchange) WAR (I-Warsaw Stock Exchange) ZSE (I-Zagreb Stock Exchange)
Okunye okukhethwa kukho: *
Imali engenayo enenzuzo ukuletha izinkampani ezizuzisa ngokusho kombiko wamuva wokuhola. Ngaphandle kwezikweletu - ukuletha izinkampani ngaphandle kwezikweletu kumabhange noma kuhulumeni. Wonke amanani ase-US dollar - amasheya ezinkampani athengiswa ngezimali ezehlukene, ukuze kube lula ukufanisa, wonke amanani azoguqulwa abe yiDola lase-US.
Imali engenayo enhle
Wonke amanani ku-USD
✔ Amasheya angu-68166 ahlangabezana nemigomo
Ukusebenza kwezezimali: *
Idatha kuma-dividends nezitatimende zezimali ayitholakali kuzo zonke izinkampani.
Izindleko ze-R & D
Inani lokukhokha lokuhlukanisa
Ukuzuza nge-share ngayinye
* Idatha kuma-dividends nezitatimende zezimali ayitholakali kuzo zonke izinkampani.
Bonisa amasheya angu-TOP 200
Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali? - enye yezinsizakalo ezibaluleke kakhulu ze-inthanethi zesayithi allstockstoday.com
Lapho ungatshala khona imali ngumbuzo obaluleke kakhulu kubo bonke abatshalizimali. Kuyacaca ukuthi kunenzuzo enkulu ukutshala imali esitokisini sezinkampani ezikhula ngokuqinile futhi ngaphandle kwengozi ngentengo. Inzuzo yokutshalwa kwezimali nayo inqunywa inani kanye nokuvama kwezinkokhelo zokwahlukanisa.
Kepha ngaphandle kwalezi zinhlaka ezisobala, kunezimpawu eziningi zezinkampani ezishintshiselana ngamasheya ezingathinta lo mbuzo: "Imali yokutshala imali kuphi?".
Kwinkonzo yethu yokulinganisa amasheya ezinkampani ezinkampanini zomhlaba wonke, sinaka izinkomba zezimali ezilandelayo zezinkampani:
Ngabe intengo yesitoko inyukile
Lapho izabelo zikhokhwa
Izinkampani ezinemali engenayo ephelele
Isikhathi sokunyuka kwamanani entengo yenkampani ekuthengisweni kwesitoko
Ukusebenza kwemali kwenkampani - imali engenayo
Ukusebenza kwezezimali kwenkampani - izimpahla eziphelele
Ukusebenza kwezimali - imali isiyonke
Inani lokukhokha okuhlukaniswayo
Imholo ngesabelo ngasinye
Izilinganiso zesitoko esiku-inthanethi ngenzuzo yokutshala imali ikuvumela ukuthi uhlunge uhlu lwezinkampani zamasheya ngalezi zinhlaka.
Ngaphezu kwalokho, ungakha iwijethi yakho yenkampani ngayinye kusuka kwisilinganiso sethu ukuze ulandele i-inthanethi ukuthi ngabe kuyinzuzo ukutshala imali kuyo.
Imininingwane esezinsizakalweni "Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?" ithathwe kwimithombo ethembekile evulekile futhi ivuselelwa ngesikhathi sangempela.
Ngabe intengo yesitoko inyukile?
Ngabe intengo yesitoko inyukile? - inkambu yokuhlunga yensiza yethu evumela ukuthi wena ukhawulele ukukhetha kuzinkampani ezinamasheya akhe akhule ngesikhathi esithile.
Khombisa ukuthi unentshisekelo ezinkampanini ezinokwabiwa ngamasheya wazo, ngezikhathi ezithile zesikhathi.
Ngakho-ke isihlungi sethu "Ingabe intengo yamasheya inyukile" ikuvumela ukuthi ukhethe inkampani inani layo labelwe ukwanda ngesikhathi: kusuka ngeviki eledlule, kusukela enyangeni edlule, ezinyangeni ezi-3 ezedlule, kusukela ngonyaka owedlule, eminyakeni emi-3 edlule.
Lapho izabelo zikhokhwa, lolu wudaba olulodwa futhi olubalulekile kubo bonke abatshalizimali.
Ukuhlukaniswa - inkokhelo ibalwe kusukela inzuzo yenkampani futhi ikhokhwe ngesinqumo somhlangano wabaninimasheya enkampanini. Ukuhlukahluka kuvame ukukhokha imali.
Isihlungi sethu sikuvumela ukuthi ukhethe izinkampani ezikhokha noma ezingakhokhi.
Futhi labo abakhokhelayo bangakhetha isikhathi lapho izinkampani zikhokha izabelo.
Isihlungi senkokhelo yokwahlukaniswa kwezimali yizinkampani zemakethe yamasheya yomhlaba sikuvumela ukuthi ukhethe inkampani ngemvamisa yezinkokhelo: kanye ngonyaka, kanye ezinyangeni eziyisithupha, kanye ngekota, kaningi ngonyaka.
Izinkampani ezihola imali engenayo
Izinkampani ezinemali engenayo ephelele yizinkampani eziphumelela kakhulu emhlabeni.
Imali engenayo eqhubekayo yenkampani iyiphupho lanoma yimuphi umphathi ophakeme wale nkampani nanoma yimuphi umtshalizimali.
Ukuhlunga kwensiza yethu kukuvumela ukuthi ukhethe inkampani enengeniso enhle evela kuzo zonke izinkampani zomhlaba futhi ubabheke njengabenzi bezicelo zokutshala imali kuphela.
Isikhathi Sokukhula Kwamanani Amasheya
Isikhathi sokunyuka kwamanani entengo yenkampani ekushintshiselweni kwesitoko kuyinkomba enkulu yokuqina kwenzuzo yenkampani. Uma inkampani isebenza ngokuqinile futhi ikhombisa njalo inzuzo, khona-ke amasheya ayo akhula njalo.
Isikhathi sokukhula ngokuqinile kwenzuzo yenkampani singase sehluke. Isikhathi esijana kulokhu, kukhulu inani lenkampani.
Inkonzo yethu yenza sikwazi ukuhlela uhlu lwezinkampani ngokuya ngesikhathi sokukhuphuka kwamanani: yeminyaka engu-3 edlule, kusuka ngonyaka owedlule, ezinyangeni ezi-3 zokugcina, kusukela enyangeni edlule, kusukela ngeviki eledlule.
Ukusebenza kwezimali, imali engenayo
Ukusebenza kwezimali kwenkampani, okufana nemali engenayo, inani eliphelele lemali yenkampani yesikhathi esibikiwe sokubika lisebenzisa zonke izindleko nentela.
Isikhombisi sezezimali "Imali engenayo" sithinta kakhulu ukukhokhwa kwemali eyabelwe.
Imali engenayo yenkampani ibuye ithinte ukukhula okuzayo kwentengo yamasheya yenkampani emakethe yamasheya.
Izinkomba zezimali zenkampani, impahla ephelele
Ukusebenza kwemali kwenkampani. Inani lempahla lilonke liyinkomba esisho ukuthi inkulu kangakanani futhi ithembeke kangakanani inkampani.
Isamba sempahla yenkampani yisikhwama esinikeza inani lesabelo.
Njengomthetho, inani eliphelele lezabelo zenkampani alize liwele ngaphansi kwenani lempahla yenhlangano ekushintshanisweni kwesitoko.
Ukusebenza kwezimali, imali isiyonke
Ukusebenza kwezimali. Imali engenile yenkampani isamba semali etholwe ku-akhawunti yenkampani isikhathi sokubika esikhethiwe.
Imali isiyonke yenkampani iyinkomba eyisisekelo ebonakalayo yokuthi kuzoba yini inzuzo yenkampani esikhathini sokubika samanje nesilandelayo.
Enkonzweni yethu ye-inthanethi yezinkampani ezilinganisa ngokushintshaniswa kwesitoko, ungahlela izinkampani ngesinkomba "imali ephelele yenkampani".
Imali eyinkampani iyisamba senani lazo zonke izabelo zomkhankaso.
Ukwenza imali njengenkampani kuyisisekelo esikhuluma ngokuyinhloko ngosayizi wale nkampani. Ungahlunga izinkampani ngesisekelo se- "capitalization" yenkampani.
Njengomthetho, emakethe yamazwe omhlaba, izinkomba zezimali ezinkulu zezinkampani zomhlaba zibhekwa ngamadola.
Isaphulelo sokuhlukaniswa kwemali - imali etholwayo etholakala kuyunithi ngayinye yemali etshaliwe ngxenye ngayinye, futhi kunqunywa inani lemali ekhokhwayo kule sabelo.
Isivuno sokwehlukaniswa kwemali, kanye noshintsho entengo yesabelo esikhathini sokubika, inzuzo ezotshalwa ngumtshalizimali ezofaka isabelo senkampani.
Kodwa inkomba "isivuno sokuhlukanisa" imvamisa izinzile kunentengo yesitoko. Ngokutshala imali okuhlala isikhathi eside, kungukuqoqeka kwesabelo okuyiso okuyisiqondiso esikhulu sokuthi abahlanganyeli bezimakethe zamasheya batshale kule nkampani.
Inani lokukhokha okuhlukile
Inani lokukhokha okuhlukaniswayo liyinkomba ephelele yenkampani yonke futhi inquma ukuthi yimalini imali esetshenzisiwe ukukhokha zonke izabelo zenkampani.
Inani lokukhokha okuhlukaniswayo liyathandeka lihambisana nenzuzo ephelele yenkampani nezindleko zesabelo esisodwa.
Kwinsizakalo yethu yokulinganisa kwesitoko, ungakhetha indlela yokuhlunga ngenkomba ye- “D payend payroll”.
Imholo ngengxenye ngayinye - enye yezinkomba eziphambili zomtshalizimali emakethe yesitoko.
Imholo ngesabelo ngasinye - inzuzo isiyonke yenkampani, ihlukaniswe ngenani lawo wonke amasheya enkampani abhalwe kuma-stock exchange.
Ungahlela uhlu lwezinkampani oludingayo ngezici "zokuhola ngakunye" ukubona izinkampani ezizuzisa kakhulu.